Njengoko ilizwi lisithi: "Uthando lubi, uya kuthanda kwaye ...". Hayi, kungekhona ukuba imele imfuyo yethu eneempondo kunye nezinselo. Uthando luyakubonisa ezinye iinkathazo, ezinzima kunzima ukuziqonda. Ngokomzekelo, kude nentombazana enye yazibuza: yintoni enokuyenza xa uthanda nomzala?
Kwimeko enjalo, impendulo ekhawulezayo kwaye kulula ukuyifumana. Emva koko, yonke into iya kubonakala ikuphi: imithetho yemvelo kunye noluntu. Kodwa sisamazama ukufumana impendulo kumbuzo: wenzeni ukuba uthanda nomzala?
Ndiyamthanda umzala wam
Ukuqala, usadinga ukuqonda iimvakalelo zakho. Amantombazana amaninzi acinga ukuba uyabathanda, xa eqinisweni, banemvakalelo ehluke ngokupheleleyo, enzima ukuyiqonda. Ngubani osibona umzalwana? Ewe, ukuba umhle, umzalwana wokwenene, ngoko sibona kulo mkhuseli, uncedisi, umntu osithandayo "ngaphandle kwesizathu", uya kuhlala exhasa. Kuba mzalwana, sihlala sihlala sifuna ukukhuselwa. Enyanisweni, ukuba ubona umzala emehlweni akho njengawo, kuvela ukuba uwela phantsi kwayo yonke imigangatho yendoda efanelekileyo. Yilapho intombazana iqala ukuziva ukuba uyayithanda nomzala wakhe. Enyanisweni, oku kungenjalo. Oko kukuthi, ngokungathandabuzekiyo othandweni, kodwa ngendlela eyahlukileyo. Emva koko, sithande kwaye siyamthanda izihlobo, kodwa le ntliziyo inemeko eyahlukileyo kunokuba ithande indoda. Kwaye amaxesha amaninzi amantombazana adibanisa le mvakalelo, kwaye ke awazi into enokuyenza. Ngokuqhelekileyo oku kuyenzeka kubafazi abasakhulayo kwintsapho engaphelelanga, oko kukuthi, ngaphandle kobawo. Kule meko, intombazana iqala ukukhangela umkhuseli kwaye imbona kumzalwana. Kodwa ngakolunye uhlangothi, imodeli yentsapho yakhe ebekwe kwisicatshulwa ayinikezeli omnye umntu onokuba ngumyeni wakhe, kuba unako ukuphosa, ukucaphukisa, ukucaphukisa. Kodwa umzalwana wam othandekayo, abathandana nabo kunye naye, akaze akwenze. Yingakho iingxaki zengqondo neentlungu ziqala. Ukuba uqonda ukuba zonke ezi ngasentla zi malunga nawe, phinda uhlalutye ngokucokisekileyo imvakalelo yakho kumzalwana wakho. Mhlawumbi udibanisa uthando kunye nomnqweno wokufumana ukhuselo kunye nentando kumntu omthandayo. Ngaphezu koko, amantombazana abakhulela ngaphandle kobawo bahlala beqhathanisa abafana kunye nabazalwana babo. Kodwa ngamanye amaxesha bavele bacinga ukuba umzalwana ungowona mhle, kwaye bonke abanye abafana abafikeleli kweli nqanaba. Ngelo xesha iimvakalelo ezingenakuqondakala ziqala ukuvela.
Kodwa imeko enjalo ayinakuqwalaselwa kwimeko apho umzalwana nodade bebenokuqhelana nabantu abadala, kwaye ngokucacileyo abazange bafumane iimvakalelo zabo. Le meko yinkqonkqo kunzima, kuba apha ukuqonda kunye nesicatshulwa nje akubonanga isihlobo kumntu. Ubona into yokuqwalasela, indoda leyo ofuna ukuba nayo. Kwaye ke umbuzo uvela: senze ntoni? Okokuqala, kufuneka ufumane indlela umzalwana wakho ekuphatha ngayo. Ukuba le mvakalelo ayihambisani, ngoko, baninzi, akufanele bathethe ngaso nonke. Emva koko, njengoko kuyaziwa, ubudlelwane phakathi kweentsapho zigwetywa. Yaye ingongoma apha ayikho kuphela kwimimiselo yentlalo, kodwa nakwimvelo, nangona kunjalo, sele kunzima ukuqiqa ngezinto eziphilayo zanamuhla ezonakalisa impilo ngakumbi. Kodwa ukuba iimvakalelo azihambisani, ngoko kuphela into oyifumanayo ekuqaphelisweni kukuhlaselwa kwezihlobo. Kule meko, kungcono ukunqanda le mvakalelo ngokwakho.
Kodwa xa umzalwana ekuthanda njengokuba wenzayo, ngoko kuyimfuneko ukugqiba kunye nokuba unokumelana nomphakathi ongenakukudumisa ngenxa yesigqibo esinjalo. Ewe, njengoko kuchazwe ngasentla, kukho inyaniso kumazwi abo. Kodwa ngakolunye uhlangothi, umninzi nomzalwana nodade, abangazange bavunyelwe ukuba kunye kunye, bahlale bebodwa, njengokuba bebathandana. Ngoko ukuba uyamthanda umntakwenu, kwaye uyakuthanda, ke uqokelele intando namandla uze ube yintonga kwaye ungayithobeli loo ntetho. Ekugqibeleni, le yintsapho yakho kwaye ukuba bayakuthanda, ngoko ndiya kuqonda kwaye ndiyamkele. Kungekudala okanye kamva, kodwa kuya kwenzeka. Okwangoku, ufuna nje umonde omncinci, ukuze ungalahlekelwa yintando yobomi bakho.
Ubume obuphikisanayo nothando kunye nendlela yokubonakalisa kwayo
Ngaba ukholelwa othandweni ekuqaleni?
Kufuneka phi ulwalamano olunzulu?
Amanqanaba: inzondo, uthando
Umtshato ongalinganiyo: ukuba umntu udala kakhulu
Umda wobudala kwiibini
I-10 imisela ukunyamekelwa komlomo ebusika
Imozulu kunye nokushisa kwamanzi elwandle eliseSochi - Oktobha 2017 - I-Forecast evela kwiziko le-Hydrometeorological Centre
4 iikholeji zewayini zeendlovu ezona zilungelelaniso
Biography uShannon Doherty
Amaqanda: Iingxaki eziphambili
Indlela yokunciphisa amabele amaninzi kwaye wenze ngakumbi
I-Biography kunye nomsebenzi womculi uAlexei Vorobyov
U-Xenia Borodina akaxhomeki kwimali yendoda yakhe
Indlela yokuchazela umntwana ukuba upapa uza kuba nosapho olutsha?
I-Strawberry mix Privorot
Ukunyaniseka kwindawo yokusebenzela
Ukukhulula imeko ngokunyuka kwesisu kuya kunceda ukondlo olufanelekileyo
Oko abantu bathanda abafazi
Ukufunda ngemibala ebomvana: iqoqo lokuhlobisa uBobby Brown Sunset Pink
Umbala we-Beige ngaphakathi
Indlela yokukhawuleza ukukhula kwee-eyelashes?